हातको छाला तथा खुट्टाको कुर्कुच्चा फुटेको छ भने अब यो विधि अपनाएर निको पार्नुहोस् – ehalkhabar
Home > शिक्षा/स्वास्थ्य > हातको छाला तथा खुट्टाको कुर्कुच्चा फुटेको छ भने अब यो विधि अपनाएर निको पार्नुहोस्
Rajendra Kaphle २९ पुष २०७४, शनिबार ०४:०५ January 13, 2018 शिक्षा/स्वास्थ्य	0
हाम्रो शरीरको कुनै अंग छाला बाहिरी नियमित रुपमा घर्षण भईरहन्छ तब उक्त छालाले त्यस वस्तुबाट जोगिनका लागि कडा छालाको आवरण बनाउँदै जान्छ ।चिसोको कारणले पनि हात र खुट्टा फुट्ने,चकिने हुन्छ । यस्तो कडा छालाजलाई क्याल्स भनिन्छ । यस्तो कडा छाला विशेषगरी हात र खुट्टाको पैतालाको पछाडिको भाग कुर्कुच्चा फुट्नेरचर्किने गर्दछ ।
प्राय मानिसहरुलाई यस्तो समस्याले सताईरहेको हुन्छ । यदि तपाईलाई पनि यस्तो समस्या छ भने अब चिन्ता लिनछोडिदिनुहोस् । यसको समाधानका लागि तपाईले घरमै उपलब्ध हुने सरसामानबाटै उपचार विधि अपनाउन सक्नुहुनेछ ।
यस्तो बिधि अपनाएर चिनीको प्रयोगबाट हामीले घरमै यसको उपचार गर्न सक्छौ । आधा गिलास जति चिनी लिनुस् । चिनीको आधा भाग जति मनतातो तातो पानिमा चिनीलाई घोलनुस् । यदि उपलब्ध गर्न सकिन्छ भने पानिको सट्टामा तपाईले ग्लिसिरिन अथवा नरिवलको तेल पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । यसलाई चिनीसँग घोलेर बाक्लो लेद बनाउनुहोस् । यसमा तपाईले पुदिना पनि मिसाउन सक्नुहुन्छ । यसरि तयार गरिएको चिनीको लेदलाई तपाईले फुटेको कुर्कुच्चा अथवा फुटेको हातमा लगाउँदा यसले छालालाई नरम, मुलायम बनाउनुका साथै यसले छालालाई सफा पनि बनाउँदछ ।
भुइँकटहरको बोक्रामा इन्जाईम र एसिड पाईन्छ जसले फुटेको छालालाई निको पार्नमा मद्दत गर्दछ । त्यसैले भुइँकटहर तास्नेसाथ त्यसको बोक्राले फुटेको कुर्कुच्चा वा अथवा छालामा राम्ररि ढाकेर नरम कपडाले बाँध्नुहोस् । यसरि बाँधेको बोक्रालाई केहि घण्टा पश्चात् परिवर्तन गरि फेरि अघि जस्तै क्रिया दोहोर्याउँनुस् । यस्तो उपचार विधि लगातार एक हप्तासम्म गर्नाले तपाईको फुटको हात(खुट्टा निको हुनेछ ।
आवश्यक्ता अनुसार मनतातो पानिमा ३.४ चम्चा बेकिङ्ग सोडा मिलाई त्यसलाई घोल्नुहोस र यसमा फुटेको हात, खुट्टाको कुर्कुच्चालाई डुबाउनुहोस् । यसो गर्नाले पनि फुटेको छालालाई निको पार्दछ । फुटको हात र कुर्कुच्चालाई निको पार्ने सबैभन्दा सरल र सस्तो उपचार भनेको हल्का तातो पानीमा भिजाउनु हो ।
पहिलाे पटक ‘ब्याकफुट’ मा डा. के‍.सी. : केही बेरमा अनसन ताेड्दै
निर्वाचन प्रचारप्रसारमा बालबालिकाको प्रयोगमा रोक
मोबाइल एप्सबाट खोल्न र बन्द गर्न सकिने खानेपानीको उद्घाटन,तपाईहामीलाई सुन्दा अचम लागन सक्छ